कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल कतिपटक प्रयोग गर्न सकिन्छ ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
कुनै खानेकुरा तारेर, भुटेर बाँकी रहेको तेल के गर्ने ? अक्सर हाम्रो मनले भन्छ, ‘होइन, किन फ्याक्ने । अर्को पटक फेरी काम लाग्छ ।’
हामी कुनै खानेकुरा तारेर बाँकी रहेको तेललाई जतनसाथ राख्छौं । अब सोही तेल अर्को खानेकुरा पकाउन उपयुक्त हुन्छ ? कुरा स्वादको होइन । स्वास्थ्यको हो । के भनिन्छ भने, पटक पटक तेल प्रयोग गर्दा त्यो विषाक्त बन्छ ।
एक पटक प्रयोग गरिसकेको तेललाई कतिपटक प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने कुरा खानाको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ ।
चाडै टुक्रिने खानेकुरा छ भने यसको कण तेलमा लामो समय तैरिने गर्छ । उदाहरणको लागि ब्रेड क्रम्ब । तेलमा ब्रेड क्रम्बको कण अत्याधिक हुने गर्छ, जसले गर्दा यसलाई पुन प्रयोग गरिने सम्भावना न्युन हुन्छ ।
Don't Miss it खेलाँची गरे भयानक समस्या बन्न सक्छ पेटको अल्सर, पढेपछि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला
Up Next यस्ता लक्षणले बताउँछ घाँटीमा क्यान्सर भएकाे !